Yaa ku faaiideya isdhex-gal Dhaqaale oo ka dhaca geeska wakhtigan? W/Q: Axmed-Nasri D. Husein – somalilandtoday.com
Yaa ku faaiideya isdhex-gal Dhaqaale oo ka dhaca geeska wakhtigan? W/Q: Axmed-Nasri D. Husein
“Maadama oo aan ka mid aheyd dadka wax ka bartey culuumta Dhaqaalaha,waxaan si kooban maqaalkan uga hadli doona jawaabta, weydiinta aan ciwaanka uga dhigey maqaalka . muxuu yahay is dhex-gal Dhaqaale (economic integration)? Maxaa looga dan leeyahay marka la sameyneyo is dhex gal noocan ah? Somaliya, Somaliland iyo Djibouti midkee ku faa’iidi kara wakhtigan? Arragtideyda oo aan sabab uga dhigeyo aqoon iyo xaalada geeskaba ayaan si kooban ugaga faaloon”.
Waxaa suuro gal ah in aanan u macneyn kalmadaha qaar sidii ugu habooneyd.
Haddi aan ku horeeyo muxuu yahay is dhexgal dhaqaale (economic integration)? Waa marka wadamo dhowra oo kuwada yaala
gobol/ qaarad lama leh xadad ay heshiisyo ka yeeshan sidii ay dhaqaaalahooda isugu furi lahaaye ugana saari lahaayen caqabadaha hortaagan isku socodka dhaqaalaha iyaga oo meesha ka saareya cashuuraha badan iyo wax kasta oo yareyn kara ama hor istaagi kara arrintan. Wuxuuna leeyahay heerar iyo marxalado kala duwan. Inta badan waxaa heearaka uu maro loo qeybiyaa shan heer. Sida wax kasta oo kale ayuu u leeyahay faa’iidooyin iyo khasaareba ka qeyb galeyaasha. Badanaa se sida looga faa’iideysta waxay ku xidhan tahay ka qeyb gale kasta awoodiisa dhaqaale, aqoonta dadkiisa iyo nidaamkiisa dowladnimadiisaba. Shaqsiyan anigu mar walba waxaan aamisanahay isdhex-galka noocan ahi inuu u wanaagsan yahay dayowga addunka qaarad iyo gobolkey doonanba haku nooladane, maxaa yeelay wey is camireyaan dhaqaalaha ummaduhu oo qolaba waxbey haysa waxna wey u baahan tahay taasina waxay sahleysa in nolosha qofka caadiga ah ee addunka jooga uu si fudu u helo baahiyaha aasasiga ah maadam oo uu yaraado heerka faqrigu markasta oo talaabo noocan ah hore dunnidu u qaado.
Sido kale wuxu hoos u dhigaa khilaafadka sida fudud uga dhex dhaca dowladaha maadamo ay imaneyso in wax badan la xeeriyo. Inkasta oo taa cakiskeeda uu hoos u dhigo madax banaanida wadamada siyaasiyan oo aanu wadana fursado u banaan si keli ah uga faa’iideysan Karin iyada oo ay daliil cad u tahay sababta UK uga baxayso Yurub inteeda kale. Walow marka ay heerkan gaadha tahay heerarka u dambeeya ee is dhex-galka.
Haddi aan intaa kaga imaado qodobkaas maamado si kooban uga hadleyo. Waxaan hadda eegi doona heerarka is dhex-gal dhaqaale uu maro. Iyada oon qodob qodob isku yara dul taagi doono shanti heer een hore usoo sheegay.
Free trade.( ganacsi xor ah) Waa hab ama nimdaam dhaqaale oo wadamo dhowr ahi ku heshiiyaan in ay meesha ka saran ama ay hoos u dhigaan caqabad kasta oo cashuureed taaso yareyneysa isku socodka dhaqaalaha iyada oo u jeedadiisu tahay ka faa’iideysiga kheyraadka qolo waliba ay heyso si loo helo waxa loo yaqaan (economics of scale iyo comparative advantage )oo ah in hoos loo dhig kharashaadaka wax soosaarka maamado cashuurihii meesha laga saarey iyo in laga kala faa’iideysto qoloba wax ay hesyso ama ay si fudu usoo saari karto ee kuwa kale ku culus ama aaney haynba. Marxaladani waa halka ay ka bilaabmanto is dhex-gal dhaqaale.
Custom union. ( mideynta cashuuraha) Heerkani waa heerka ku xiga kaa hore had iyo jeerna heerarkani midba mid ayuu fure u yahay. Hadaba isaguna waa nidaam ay wadamadii galey heshiiskii koowaad ku mideyneyaan cashuurahooda ay kula dhaqmeyaan wadama aan heshiiska qeyb ka aheyn. Iyaga oo mideyneya cashuuraha ay ku cashuureyaan waxyaabaha uga imaneya wadamada kale si ay meesha uga saran waxa loo yaqaan re-export oo ah in wadan ka mida iyaga wax laga soo dejiyo dabadeedna ku kale oo isla iyaga uuna loo dhoofiyo.
Common market. ( suuq guud) Waxaad mooda in si ay iskugu dhowyihiin labadan dambe wuxuu kani kaga duwan yahay shaqaalaha, adeegyada iyo shirkaduhu wey iskaga gudbi karaan wadamada iyada oo wadan kasta si gaar ah u leeyahay nidaamkiisa hagiseed (Regulations) iyo hubinta tayada ama shuruudaha uu dhigtey (standers). Waana heer ka sii yara mug weyn kuwii hore.
Economic union or single market. (suuq keliya) Heer kani waa mid ka sii sal balaadhan dhamaan kuwa hore waana heer wax kasta oo caqabad ku ah is dhex-galka dhaqaale meesha laga saareyo, shaqaalaha iyo shirkaduhu si toos ah isugu gudbeyaan lana sameyneyo nidaamyo guud oo lagu hageyo dhaqalaha ilaa heer la sameysanyo lacag qudha iyo siyaasado maaliyaded oo mid ah sida midowga Yurub oo kale. Badanaana waxa laga simaa siyaasadaha dhaqaalaha oo dhan. Waana heerka is dhex-galka dhaqaale u dambeeya waayo heerka ka dambeeya wuxuu isku bedela is dhex-gal siyaasadeed sida aynu arki doono.
Political union ( midow siyaasadeed) sida aan kor kuso sheegay heerkan waxa loo guurey dhanka siyaasada maamado dhaqaalihii xoog loo mideyeey, markasta oo dhaqaale ahaan la is dhexgalo na waxaa sahlanata is fahanka bulshada iyo wax wada yeelashada taasina waxay dhiirigelisaa in siyaasadana la mideeyo si loo sii xoojiyo midnmada. Markey dowladuhu isla gartaan iney sameeyan is dhexgal siyaasadeed waxaa sameysma waxa loo yaqaaan federation iyad